Dib u eeg Xiaomi Redmi Xusuusin 7, iibiyaha xiga ee ugu wanaagsan ee dib loo eegayo | Androidsis
Maanta waxaan haysanaa dib u eegis dheer oo la sugayay. In Androidsis waxaan ka helnay waxa hubaal ah iibiyaha cusub ee ugu fiican ee laga helo Xiaomi, the Redmi Note 7. Terminal qiime ahaan ku fadhiya meel dhexdhexaad ah. In kasta oo laga qayb qaadanayo qeexitaankiisa waxay ku yaalliin meel ka sarreeya.
Sida ficil ahaan dhammaan qalabka Xiaomi, xiriirka ka dhexeeya tayada iyo qiimaha way adag tahay in la iswaafajiyo. Ka dib markii aan tijaabinin Redmi Note 7 cusub maalmo yar, waan xaqiijin karnaa shaki la'aan. Hada waad awoodaa iibso iibka wakhti xaddidan halkan.
1 Redmi Note 7 waxay ku nooshahay filashooyinka
2 Waxyaalaha sanduuqa ku jira
4 Naqshadeyn ku samee khadka hadda jira iyo walxaha kugu habboon
5 Redmi Note 7 qaybo
5.1 Dhalada dhalaalaya dib
6 Shaashadda Redmi Note 7
7 Waxaan eegnaa gudaha Xiaomi Redmi Note 7
8 Kaamirada Redmi Note 7 oo ku taal dhererka nasashada
9 Sawirro laga qaaday Xiaomi Redmi Note 7
9.1 Sawirka muuqaalka
9.2 Sawir leh dhaweyn
9.3 Sawir faahfaahsan
9.4 Sawir saameyn sawir leh
9.5 Sawir leh flash
10 Codsiga kamaradda ee heerka MIUI 10
11 Amni la hirgaliyay oo soo hagaagaya
12 Batariga lagu keydiyo si uu kula socdo
13 Shaxda Qeexitaanka Farsamada
14 Fikirka Tafatiraha
15 Fikirka Tafatiraha
Redmi Note 7 waxay ku nooshahay filashooyinka
Muddooyinkan dambe si joogto ah ayey u dhacdaa markii taleefannada casriga ee Xiaomi cusub ay ku dhacaan suuqa. Ogaanshaha sumcadda shirkadda moodada, filashooyinka ayaa sarreeya markay tahay la kulanka xubin cusub oo reerka ah. Iyada oo la adeegsanayo ogeysiiska, mid ka mid ah kuwa ugu iibinta badan uguna wanaagsan ee ay aqbaleen dadweynuhu ma noqon doono mid ka yaraada.
Bilowgii, waxaan dhihi karnaa taas Xiaomi Redmi Note 7 ayaan niyad jabin. Laakiin nasiib wanaag maahan oo kaliya in aysan naga niyad jabin. Sidii aan fileynay, waa aalad ugu sarreysa shirkad dammaanad qaad ah. IYO guusheeda iibku waxay u badan tahay inay dhaafto xitaa kuwii ka horreeyay.
Marka la eego isbeddelka shirkaddan shantii sano ee la soo dhaafay oo aan arkay aqoonsiga maanta ay heleen dadka isticmaala, maanta Xiaomi mar dambe ma haysato wax ay ku caddeyso. Si fudud maxaa yeelay waa taleefanka casriga ah ee Mi, waxaan ognahay inuu yeelan doono heerar tayo sare leh. Iyo muuqaal muuqaal ah oo la jaan qaadaya isbeddellada ugu dambeeyay. Tanina waa Redmi Note 7, taleefan aad hadda awooddo qiimo jaban ku iibso Waqti Xaddidan.
Eegida sanduuqa Xiami Redmi Note 7 waxaan helnay, marka lagu daro waxa aan filan karno, faahfaahin yar. Waxaan leenahay aasaaska, taasi waa, telefoonka, keydka xogta iyo xeedho. Waxaan jecel nahay inaan helno taas siligga, oo sidaas darteed isku xiraha casriga ayaa leh Nooca USB ee nooca C. Waxay u muuqataa in Xiaomi ay si hubaal ah u macasalaameysay dhammaan noocyadeeda kala duwan ee dekedda Micro USB taasina waa horumar.
Waxaan helnay wax caan ku noqday taleefannada casriga ah ee Xiaomi. A gacmo silikoon ah oo ku habboon sida galoofyada iyo in aan caam ka nahay joojin mayno mahadcelinta. Had iyo jeer waxaan dhahnaa waa wax ay tahay in shirkadaha kale ee badan ay tixgeliyaan. Inaad kiis ku haysatid sanduuqa waa laba shay oo muhiim ah, ilaalinta taleefankeena cusub bilowga iyo inaad kharash gareeyso wax yar.
Si aan u dhammeyno ka hadalka waxa ku jira sanduuqa, iskama celin doonno inaan joojino magacaabista maqnaanshaha. Xiaomi waxay ku dhowaad bilowgiiba doorteen, iyadoo cudurdaar loo leeyahay dhimista kharashyada, waayo kuma jiraan headset. Waa run in taleefannadooda guud ahaan ay ka jaban yihiin inta badan tartankooda. Laakiin wali, waxaan door bidnay inaan helno sameecadaha dhagaha leh taleefan cusub.
Haddii aad xiiseyneyso inaad iibsato Xiaomi Redmi Note 7, hadda kaliya inaad raacdo Androidsis waxaan haynaa qaar rasiidh dhimis si aad ugu heli karto qiimaha ugu fiican.
Nooca 3 + 32GB kuuboon dhimis: GV32N7OOC $ 185.99 Halkan ka iibso
Nooca 4 + 64GB kuuboon qiimo dhimis ah: X64Note7 $ 197.99 Halkan ka iibso
Nooca 4 + 128GB Ku-dallaca Dhimista Madoow: 128RN7GL $ 206.99 Halkan ka iibso
Nooca 4 + 128GB Ku-dallaca Buugga Buluugga ah: RN7Global $ 235.99 Halkan ka iibso
Haddii aad xiiseyneyso alaabada kale ee Xiaomi oo leh kuubanka 'MISALE10' waxaad heli doontaa qiimo dhimis 10% ah dhammaan badeecadaha aad ka heli karto halkan.
Naqshadeyn ku samee khadka hadda jira iyo walxaha kugu habboon
Hadda waa waqtigii laga hadli lahaa muuqaalka muuqaalka ee 'Redmi Note 7'. Marka horena, waa inaan ka faalloonnaa kaliya markaan ka saareyno sanduuqiisa waxaan ku qanacsan nahay inay tahay casriga ah is haysta. Kuwa ay dhamaadka, sidii aan ku baran jirnay, iyagu waa fiican. Ka dib dhawr sano oo ay ku jirtay ku dhammeeyaa macdanta birta ah waxay qaateen intabadan saxiixyada, qalabkan waxay joojiyeen inay noqdaan kuwo moodada. Annaguna waxaannu markhaati ka nahay isku-darka waxyaabaha aadka u jilicsan ee mudnaanta leh sida muraayadaha.
Dhabarka astaanta cusub ee 'Redmi Note 7' ayaa lagu dhammeeyay muraayad, sida moodooyinka ugu dambeeyay ee badankood ee soo saarayaasha. Laakiin ma aanan jeclayn inaan helno balaastik ah oo ku yaal xayndaabka ku biiraya hore iyo xagga dambe. Way cadahay inay ka soo dheceen balaastik tiro daaweyn iyo dhammeyn ah oo teknolojiyaddii ugu dambeysay lagu dabaqay. Laakiin fahankayaga waxay umuuqataa inay jiraan qayb yar oo hadhay oo ay durba umuuqatay mid daabacan.
Markaan idhi balaastigga, maaddi ahaan, noolama muuqato kan ugu “sarreeya”, waa inaan taas garwaaqsanno muuqaalka ay muujineyso guud ahaan runtii waa soo jiidasho. Nooca tijaabada ah ee aan ku helnay midab madow dhalaalaya waa mid aad u xarrago leh, oo waxay bixisaa muuqaal ifaya. In kasta oo, sida midabbada madow ee dhalaalaya, dusha sare ee dambe ay ka dhigi doonto soo bandhig aad u fiican faraha.
Redmi Note 7 qaybo
Mid ka mid ah walxaha cajiibka ah ee qalabkan ku jira shaashad weyn iyada oo ay taasi ku tirinayso jidh xitaa yaraan kara. Waxay leedahay a 6,3 inji xagal taas oo aan ka helno a darajo yar oo qaab-dhicis ah halkaasoo ay ku yaalliin kamaradda sawir-qaadaha (selfie camera) ee aan ka hadli doonno marka xigta Shaashadu waxay leedahay Full HD + qaraarka waana lagu dhameeyay 2.5 galaas qalooca taas oo ka dhigaysa is dhex galka jirka taleefanka mid aad u fiican. Oo waliba iftiiminaya ilaalinta qaybta hore ee Gorilla Glass 5.
Hadaad eegto hoose, waxaan ka helnaa qaybta dhexe albaabka laga soo galo Nooca USB C. Dhinacana u roon, gees walba waxaan ka heleynaa jeexjeexyada halka ay ku yaalliin sameecadda iyo makarafoonka. Xal dhexdhexaad ah oo umuuqda mid wanaagsan oo qalabku siinayaa is waafajin weyn oo ku saabsan joojinta.
Ka qaybgalka kor ee 'Redmi Note 7' waxaan ka helaynaa waxa ay noo tahay yaab yaab leh. Waan aragnaa sida ay ujirto 3.5mm aqbasho jack jack sameecadaha dhagaha. Cadayn cad oo ah inay tahay si fiican ula jaan qaada USB Type C. Iyo in ka mid noqoshada isku xiraha lacag-bixinta ugu casrisan aysan noqon sabab, ama cudurdaar, loo tirtiro.
Sidoo kale xagga sare ayaan ka helaynaa deked infrared ah in soosaarayaal badan aan hore loo maqal sanado ka hor. Mid kale oo dheeri ah taasi waxay ku siinaysaa Xusuusin 7 koronto badan, sida kontaroolka fog. Taas oo aan awoodnay inaan ku tijaabinno codsigeena oo ay si buuxda ula shaqeyso xitaa telefishannada aan ahayn kuwii ugu dambeeyay.
In uu Dhinaca midig waxaa jira badhanno loogu talagalay xakamaynta mugga. Oo ka hooseeya badhanka dabka / dabka iyo quful. U fiirsashada dhinaca bidix ah booska kaararka. Dhexdeeda waxaan isku mar gelin karnaa labo kaar oo Nano SIM ah, ama ku beddelan kara Nano SIM leh kaarka xusuusta Micro SD.
Halkan guji oo iibso Xiaomi Redmi Note 7 oo leh qiimo dhimis 17% ah
Dhalada dhalaalaya dib
Redmi Xusuusin 7 ayaa lagu dhammeeyay dhabarkiisa gudaha muraayad siman Taasi waxay u taagan tahay dhammaystirkeeda wanaagsan. Inkasta oo terminaalka la helay, midabka madow aan la mahadin. Midabada kale lagu heli karo buluug iyo casaan, waxay leeyihiin wax yar oo dusha sare ah kor ilaa hoos sifiican u dhammeeyay taasna waxay dareemeysaa wax weyn.
Dhabarka dambe ee Redmi Note 7 waxaan ka helaynaa kamaradda sawirada. Kamarad laba-geesood ah oo isku dhafan lens-ka 48 Mpx iyo 5 Mpx taas oo aan ka hadli doono marka xigta. Muruqyada oo si toos ah loo abaabulay kuna yaalliin qaybta bidix ee kore ee dhabarka. Halkaas oo aan ka helno a flash laba LED ah oo xoogan.
Bartamaha qeybtiisa dambe waxaa ku yaal faraha akhristaha. Akhriste oo ku yaal dhererka ugu habboon ee akhris raaxo leh iyada oo aan qasab lagu dhigin gacanta marka aan qabanayno taleefanka.
Shaashadda Redmi Note 7
Waqtiga ayaa la gaadhay si loo eego shaashadda Redmi Note 7. Oo waxaan aragnaa sida Xiaomi, iyadoo la raacayo khadadka soo saarayaasha oo dhan, ay shaashadeeda u sii wado inay sii socoto. Gaar ahaan, waxaan ka helnaa shaashad leh a 6,3 inji xagal. Bixinta xallinta 1080 x 2340 pixels halkii inji, taasi waa, FHD +. Shaashad aad u fiican ayaa ku dhammaatay iyada oo ay ugu wacan tahay muraayadda isku dhafan ee '2.5D'.
Waxaan aragnaa sida shaashadu u hesho wax aad u badan boqolkiiba fiicnaanshaha qeybta hore ee gaaraya ilaa 81%. Qeybteeda hore ee kore, Xiaomi waxay ugu deeqday Note 7 mid yar darajo-qaabeeya, in kastoo si fiican loo soo koobay kiiskan. Gudaha gudihiisa ayaan ku ilaalinaa kamaradda hore. In kasta oo, marka lagu daro darajada iyo heerka wanaagsan ee shaqo shaashad la ogaan karo xuduud yar oo madow oo ku wareegsan, wax u muuqda xitaa kuwo ka sii fiican.
Ku saabsan darajada xagga sare, ka dheh nidaamka hawlgalka, kiiskan MIUI 10, waxaa si fiican loogu habeeyay isku-dhafkeeda. Aad iyo aad u badan, taas ayaa isaga ku mahadsan xitaa waxaan dooran karnaa inaan qarinno darajada iyo in qaybta kore ay u muuqato gabi ahaanba mugdi. Waxyaabaha, si kastaba ha noqotee, ka soo horjeedaan isticmaalka ugu badan ee shaashadda.
Hal faahfaahin oo aan jeclaanay ayaa helnay wax yar LED u ogeysiisyada. Dheeraad ah oo soo saarayaal badani iloobaan. Laakiin waxay ka dhigeysaa isticmaalkeedu mid aad noo fudud marka aan helno waxaan jecel nahay inaan u mahadcelino. Sida aan arki karno, qeyb shaashadda ka hesha dhibco aad u wanaagsan, oo sidoo kale aan ahayn kan keliya.
Waxaan eegnaa gudaha Xiaomi Redmi Note 7
Haddii aan eegno waxa Xiaomi Redmi Note 7 ay keeneyso gudaha waxaan aragnaa sida qoraalka uu usii socdo. Waxaan hor joognaa taleefan u qulqulaya sida biyaha oo qabanaya hawl kasta. Eeda badankeed waxaa leh shaqada wax ku oolka ah ee cajiibka ah ee Xiaomi ay ku sameyso MIUI. Laakiin processor-keedu sidoo kale wuxuu mas'uul ka yahay habdhaqanka bixiya khibrad sidan oo kale ah.
Xusuusin 7 wuxuu u mahadcelinayaa mahadnaq badan oo leh solvency, the Qualcomm Snapdragon 660. Processor Octa Core taas oo ka sareysa 2.2 GHz leh naqshadaha 64 gelinno. Qalab sameeye sida shirkadaha Nokia, Oppo ama Samsung ku kalsoon aaminaadooda moodooyinkooda u dambeeyay ee isku nooc ah. Chip oo ku jira Redmi Note 7 wuxuu si fiican isugu daraa a Kaarka sawirka sida Adreno 512, waxaan shaki ku jirin inuu yahay tandem aan sinnayn, sidaan soo aragnay.
Raadinta xusuustiisa, waxaan ka heli a 4GB RAM. Kuxiran karti 64GB kaydinta gudaha in aan ku fidi karno dhibaato la'aan kaarka Micro SD. Waxa kale oo jira a version bixiya isku-dar ah 3GB + 32GB. Labada fursadoodba waxay bixiyaan waxqabad aad u fiican.
Kaamirada Redmi Note 7 oo ku taal dhererka nasashada
Waan ognahay in kamaradu tahay mid ka mid ah dhinacyada ugu muhiimsan marka go'aan laga gaarayo mid ama casriga kale. Tani waa wax ay soo saarayaasha sidoo kale ogyihiin. Laakiin qaar ayaa qaatay xeelado ka guul badan kuwa kale, oo Xiaomi waxay umuuqataa inay si buuxda ugu saxan tahay sharad ay ku saxeexday Samsung qaybta sawirka.
Dhowr sano ayaa laga joogaa markii taleefannada Shiinaha lagu sameeyo ay ku guuleysteen inay daadiyaan ceebta haysashada kamaradaha tayada liita. Xiaomi wuxuu ka mid ahaa kuwa sida aadka ah uga shaqeeyay sameynta bayaankan wax macno ah malahan. Tan awgeed, waxay garatay sida loogu sharaddeeyo shirkadaha kale ee khibrada badan u leh duurka.
Xusuusta Redmi Note 7 waxaan kaheleynaa dareeraha Samsung S5KGM1. Dareere Nooca ISOCELL con furitaanka focal f / 1.8. Suuqa ku cusub laakiin shirkado badan ay hore u xiisaynayeen. Gaar ahaan, kamaradda gadaal waxaan ka helnaa a dareeraha isku xidha laba muraayadaha indhaha. Midka ugu weyn, oo leh xallinta 48 Mpx, iyo muraayadaha labaad ee xallinta 5 Mpx. Hal isku dhaf ah oo bixiya natiijooyin runtii wanaagsan.
Muuqaal ahaan kaamirada ayaa ku taal bidixda kore xagga dambe. Muraayadaha muraayadaha indhaha waxaa loo hagaajiyaa si toos ah midba midka kale. Kuwaas hoostoodana waxaan ka helaynaa a labalaab iftiin LED ah waxay si wax ku ool ah ugu qabataa xaaladaha iftiinka hoose. Kamarad aan kaliya bixinayn. Waxay sidoo kale awood u leedahay inay bixiso natiijooyin wanaagsan oo wanaagsan oo aan ku qadarin karno tusaalooyinka qaarkood.
In kamaradda sawirka hore loogu talagalay sawirada 'selfia' Xiaomi sidoo kale kuma dhicin warbaahinta. Xaaladdan oo kale waxaan leenahay a 13 Dareere Mpx awood u leh inaan sameysano "sawiradeena" heer fiican. Waxaan xitaa leenahay softiweer gaar ah si aan u qaadan karno sawirrada ugu fiican kooxda leh kamaradda hore ee xusuusta Redmi 7. Haddii aad raadineyso taleefan casri ah oo kamaraddaadu ay ku jileyso, kani waa daqiiqadaada, iyo adigoo gujinaya halkan waad ku qaban kartaa iyada oo qiimo dhimis xiiso leh.
Sawirro laga qaaday Xiaomi Redmi Note 7
Waxaa jira sawirro badan oo aan awoodnay inaan ku qaadno lambarka cusub ee Redmi Note 7. Waana inaan dhahnaa taas natiijooyinka la helay waxay ka badnaayeen kuwa lagu qanco. Waxaan nahay kamarad horteeda taas wuxuu si fiican u shaqeeyaa xaalad kasta. Anaga oo og qiimaha aan kuheli karno aaladan, wax yar ama aan dib udhac lahayn, waxaan dhigi karnaa waxa kamaradaadu awood u leedahay inay na siiso
Sawir laga qaaday maalin daruuro leh waxaan ku aragnaa sida ay tahay kamaradda Redmi Note 7 awood u leh inuu si cad noo tuso midab buuxa oo midab leh. The midabada waa run nolosha oo waxaan si fiican u garan karnaa cunsurrada sawirka. In kasta oo buuq qaar ka mid ah uu siibto diiradda, guud ahaan, marka la eego xaaladaha iftiinka, qabashadu waxay gaadhay heer wanaagsan.
Sawir leh dhaweyn
Qorrax dhaca ayaa had iyo jeer adag in la qabsado iyadoo si toos ah farta loogu fiiqayo isha iftiinka, marka qorraxdu dhacdo. Iyada oo daruuraha ay matalayaan shaashad, ayaan nasiib u helnay iftiin weyn. Sawirkan waxaan u adeegsanay dhajinta dhijitaalka ugu badnaan kaamirada Redmi Note 7. luminta fiiqnaanta iyo qeexitaanka waa mid la taaban karo, taas oo ah mid caadi ah oo leh zoom dijital ah, marka la tooganayo waxaan si fiican u aqoonsannaa dhammaan qaybaha taas oo muuqata. Shaki la'aan, dhaweyntan waxaan ku qaadi karnaa sawirro aad u hufan.
Sawir u dhow shayga, gudaha iyo iftiin macmal ah, natiijada la helay sidoo kale natiijo aad u wanaagsan. Waxaan ilaalin karnaa a faahfaahin sare kaas oo bixiya macluumaad sax ah oo ku saabsan midabada iyo qaababka. Qeexitaanka la gaadhay, xitaa qaddar badan oo nuur ah, ayaa naga yaabiyay.
Sawir saameyn sawir leh
Waa mid ka mid ah saameynta ugu badan ee la doonayo ee ay leedahay Xiaomi Redmi Note 7, taas oo ay ugu wacan tahay kamaraddeeda laba-geesoodka ah. Si aan ugu helno natiijooyinka ugu wanaagsan qaabkan sawir qaadista, waa inaan la kulannaa shuruudaha ugu yar ee arjiga kamaradda laftiisa uu noo tilmaamayo. Aad ugama dhowaan karno bartilmaameedka, ama wax ka badan laba mitir. Masaafo ku habboon waxaan ku aragnaa sida muuqaalka hoose wuxuu muujiyaa sawirka dhexe abuurista soo jiidasho indhaha soo jiidasho leh. Saamayn sifiican loo gaadhay, laakiin sidaan nidhaahno, xaddidaadyo.
Sawir leh flash
Natiijada lagu gaadhay mahadsanid labalaab iftiin LED ah Aad bay uga fiicnayd sidii la filayay. Waxaan awoodnay inaan tijaabinno taleefannada gacanta ee casriga ah ee biligleynaya halkaas maxaa yeelay waa inay ahaadaan. Sidan xaalku maaha. Qol aan lahayn iftiin dabiici ah iyo iftiin aad u liita, iftiinka Redmi Note 7 waa awood u leh inuu iftiimiyo muuqaalada ama walxaha si loo gaaro natiijooyin dabiici ah.
Codsiga kamaradda ee heerka MIUI 10
Waxaan horeyba uga faalloonay munaasabadda taas oo ku jirta Androidsis waxaan nahay taageerayaasha ugu nadiifsan Android suurto gal. Laakiin haddii aan ku qasban nahay inaan ku dhajino qaar ka mid ah lakabyada qaabeynta ugu isticmaalka badan MIUI waxay noqon laheyd midka la doortay. Oo waxay u ahaan lahayd kuwa la qabsiga nooc kasta oo Android ah iyo u kobcitaanka gacan ku haynta Nidaamka Howlgalka ee uu ku saleysan yahay.
Sidaa darteed, haddii aan ka hadalno ku-habboonaanta kamaraddaada, waxaan dhihi karnaa waxay ku jirtaa heerka inta kale. Waxaan helnay a barnaamij badan oo kala duwan. Iyadoo a "Isticmaalka" iyo suurtagalnimada qaabeynta aad dareen leh iyo sidoo kale la heli karo. Khubarada sawir qaadista iyo kuwa gacanta ku yar ayaa u sahlanaan doonta inay kaamirada u jaangooyaan waxa ay jecel yihiin.
Waxaan ka heli fursadaha fiidiyow gaagaaban, fiidiyow, sawir (caadi ah), saameyn muuqaal ah, qaab habeen, muuqaal iyo qaar kale. In kastoo haddii adeegsiga kamaradan ay muuqato, waa ku mahadsantahay softiweerka ay leedahay. Waad ku mahadsan tahay mid aad u wanaagsan isdhexgalka Sirdoonka Artifishalka, Kaamirada Xiaomi Redmi Note 7 waxay awood u leedahay inay soo ogaato goobta oo ay bixiso ugu fiican ee suurtogalka ah si loo helo natiijooyinka ugu wanaagsan.
Caawinaad dheeri ah oo hubin doonta in qabashadayada, marka lagu daro helitaanka taageero farsamo oo tayo leh, lagu qaado xaaladaha ugu fiican ee suurtogalka ah. Sidan ayaan ku hubinaynaa, dadaal la'aan, inaan sawirrada ku qaadno taageerada ugu fiican ee aan heli karno. Khibraddu aad ayey u wanaagsan tahay oo haddaad isku daydo mar dambe ma rabi doontid inaad barkinta ka joojiso.
Amni la hirgaliyay oo soo hagaagaya
Shirkadaha sida Xiaomi waxaan ku tijaabineynaa nooc kasta oo cusub kan isbedelka tiknoolajiyada loo isticmaalay in lagu helo amniga ugu fiican taleefanka gacanta. Waxaan aragnaa sida, tusaale ahaan, tikniyoolajiyadda aqoonsi wajiga hore looma isticmaalin. Ka dib markii ay ku dhaqangelinayeen waqti aan fogayn qalabkooda, a waxqabadka ugu wanaagsan noocan ah amniga.
Waxaan awoodnay inaan tijaabinno boosteejooyinka loo yaqaan 'Androidsis terminals' ee ku faanay inay leeyihiin nabadgelyo iyada oo loo marayo aqoonsi wajiga ah, oo aan aad loogu kalsoonaan karin, in yar. Telefoonada casriga ah ee furmi kara 2 ka mid 3dii tijaabo ayaa wajiyada dadka aan la ogoleyn.
Taasi waa sababta Xiaomi ay u hubisay in aqoonsiga wajiga uu si sax ah u shaqeynayo ka hor inta uusan ku hirgelin qalabkiisa farsamadaan. Kadibna tijaabinta, waxaan kuu xaqiijin karnaa inay si fiican u shaqeyso. Kaliya qofka awooda loo siiyay ayaa awood u furay qalabka, sidoo kale wuxuu furayaa si ka dhaqso badan sidii la filayay.
Waxaan sidoo kale dhabarka ku haynaa tii hore u jirtay faraha akhristaha. Waa inaan ka nidhaahno laba waxyaalood oo muhiim ah isaga. Aragtidayada, wuxuu ku yaalaa meelaha ugu fiican. Iyada oo smarpthone-ka gacanta lagu hayo, waxaa si dabiici ah loo galaa iyada oo aan la adkeynin qaabka. Dheeraad ah, hawlgalkeedu waa dhakhso oo hufan. Wax diidmo ah oo ku saabsan.
Batariga lagu keydiyo si uu kula socdo
Batariga sidoo kale waa arin muhiim ah oo aan marwalba tixgalino marka aan isbarbar dhigeyno telefoonada na xiiseynaya. Waxaa jira adeegsadayaal door bidaya inay doortaan batariyaal muhiim ah, iyagoo mudnaanta siinaya xaaladdan muuqaal muuqaal ahaan aad u badan. Xitaa iyada oo aan loo eegin miisaan aad u sarreeya. Oo waxaa jira isticmaaleyaal kale oo u diidaya casriga casriga ah oo khafiif ah.
Si kastaba ha noqotee, labadaba adeegsadeyaasha isticmaala waxay doorbidaan nolosha batroolka ugu dheer ee suurtogalka ah ee casriga ah. Madax-bannaanida taleefannada casriga ah waxaa lagu go'aamiyaa awoodda baytariyada ay leeyihiin. Laakiin sida aan ognahay, shaqada hagaajinta ee ka dhexeysa dhammaan qaybaha terminal sidoo kale door muhiim ah si ismaamulku u kala baxo.
Xusuusta Redmi Note 7 waxaan kaheleynaa a 4.000 mAh baytariga. Xamuul durba ka badan kuwa tooska ah ula tartamaya. Laakiin waxaan tixgelineynaa waxtarka tamarta ee Xiaomi uu leeyahay, is-maamulku wuu ka sii weyn yahay. Beer ay Xiaomi si fiican ugu dhaqaaqdo oo ay maamusho inay muujiso mar kasta oo aan nasiib u yeelano inaan tijaabino mid ka mid ah aaladeeda.
In kasta oo Redmi Note 7 uusan lahayn tiknoolajiyada lacag-bixinta wireless-ka ee aadka loo dalbado, way fiicantahay in taas la ogaado xeedho ay leedahay lacag degdeg ah 18w. Waqti aad u yar gudahood waxaan awood u yeelan doonnaa inaan leenahay taleefankeena casriga ah oo si buuxda u shaqeeya loona heli karo Xaqiiq muhiim ah oo og in taas oo adeegsigeedu sarreeyo ay tahay awoodo inuu socdo ugu yaraan laba maalmood oo buuxa. Taleefan si joogto ah noola socon doona taasna adigaa iska leh adoo gujinaya halkan iyadoo qiimo dhimis aanad seegi karin.
Tusaale Redmi Note 7
Gacaliye Qualcomm Snapdragon 660 OctaCore 2.2 GHz
Afka kaarka xusuusta Micro SD
Kaamirada sawirka gadaal labo 48 + 5 Mpx oo leh AI
Flash laba laydh
Kaamerada iswada 13 Mpx
Akhriska Faraha SI
Garashada wajiga SI
Batariga 4000 Mah
Lakabka shakhsi ahaaneed MIUI 10
Cabbirada 75.2 x 152.9 x 8.1
Xiriirinta wax iibsiga oo leh dhiirrigelin qiimo dhimis ah Xiaomi Redmi 7
Ka dib markii aan si fiican u tijaabinay Xiaomi's Redmi Note 7 waxaan ku hubin karnaa gacanta koowaad waxaa jira tusaalooyin yar oo ku saabsan qiimaha dheellitirka ee lacagta. In yar ama ficil ahaan aan hoos u dhicin waxaan ku dhejin karnaa a smarpthone kaas oo, kala duwanaanta uu ku qaabeysan yahay, ku bixiya wax aad u yar. Miyaad ka fikiri kartaa mobiil kale oo leh astaamahan qiimahan? Haddii qof uu ku weydiisto talo si aad u heshid casriga casriga ah oo qiimo jaban leh ha ka waaban, Xiaomi Redmi Note 7.
El muuqaalka jirka Redmi Note 7 si wanaagsan ayaa loo gaadhay mahadnaqa xulashada qalabka dhismaha iyo qaab si fiican loo baray.
El cabirka shaashadda Waxay noogu muuqataa guul. A xagal of 6,3 inches jir sidan u yar waa hormar aad loogu riyaaqay.
La 4.000 mAh baytariga iyo muddada ay bixiso waxay ka dhigeysaa inay kasbato xitaa dhibco ka badan kuwa tooska ah ula tartamaya.
La Sawir qaade waa guul la hubo. Natiijooyinka, dhaqankooda iyo tirintooda oo leh Sirdoon Artifishal ah waxay ka dhigaan iyada heer sare.
Muuqaalka jirka iyo dhismaha is haysta
Cabbirka shaashadda wanaagsan
Nolosha batteriga iyo awoodda
Kaamirada sawirka AI
Isagoo u maleynaya inaan haysanno shaashad cabirkeedu wanaagsan yahay oo leh xallin aad u wanaagsan, dhalaalka ay bixiso wuxuu noqon karaa mid gaaban. Gaar ahaan xaaladaha hufnaanta weyn ee dabiiciga ah.
que kuma haysano taleefannadan casriga ah oo leh fiilo wireless ah Waa mid ka mid ah buts-yada yar ee aan ku dhejin karno casriga casriga ah ee noocan oo kale ah.
Mararka qaarkood iftiinka shaashadda oo liita
No lacag la'aan wireless
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Reviews » Dib u eeg Xiaomi Redmi Xusuusin 7